Cabdiweli Muudey oo sheegay in lagu guul dareystay maalgelinta dib eegista dastuurka – Kalfadhi
Cabdiweli Muudey oo sheegay in lagu guul dareystay maalgelinta dib eegista dastuurka
Guddoomiye ku xigeenka koowaad ee Golaha Shacabka,Xildhibaan Cabdiweli sheekh Ibraahim Muudey ayaa sheegay in dastuurka imminka lagu shaqeeyo uusan ahayn midkii saxda ahaa ee ay ansixiyen odoyaasha dhaqanka.
Cabdiweli Muudey ayaa ka codsaday dhinacyada ka shaqeynaya dib u eegista dastuurka in ay ilaaliyan dastuurka.
‘’ Dastuurkan hala ilaaliyo ,midkii hore waa maqan yahay,dastuurkan ma ahan midkii ay ansixiyen ergada Soomaaliyeed,’’ ayuu yiri, Xildhibaan Muudey oo ka hadlayay munaasabad xalay ka dhacday xarunta dowladda hoose ee Xamar.
Xildhibaanka ayaa caddeeyay in lagu guul dareystay in dadka Soomaaliyeed ay maalgeshadan dhameystirka dastuurkan oo ay dalal shisheeye maalgaliyen,sida uu hadalka u yiri.
Hal cisho ka hor waxaa magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shir ku saabsanaa dib u eegista dastuurka oo ay ka qeyb galen guddiga dib u eegista dastuurka ee ka socday laba aqal ee baarlamaanka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya.
Dastuurkan qabyo qoraalka ah waxaa markii ugu horeysay la qorray bishii Ogoosto,sanadkii 2012kii.